के ज्ञानेन्द्र शाही र पुन्य गौतम बिच ल,फडा भएको हो ? ज्ञानेन्द्र शाही र हेमराज थापा बिच हा,तपात भएको हो ? जस्ताको तस्तै खुल्यो रहस्य भिडियो सहित – Classic Khabar
के ज्ञानेन्द्र शाही र पुन्य गौतम बिच ल,फडा भएको हो ? ज्ञानेन्द्र शाही र हेमराज थापा बिच हा,तपात भएको हो ? जस्ताको तस्तै खुल्यो रहस्य भिडियो सहित
August 9, 2021 92
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता खारे,जीको माग गर्दै सामाजिक अभियन्ता भनिनेहरुले संयुक्त सं,घर्ष समिति गठन गरेका छन् । समितिमा ज्ञानेन्द्र शाही, हेमराज थापा,ज्वाला संग्रौला लगायत रहेका छन् । सम्झौता खारेजीका लागि द,बाब दिन विभिन्न संघ,र्षका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको उक्त समितिले विभिन्न उप शीर्षक समिति पनि बनाएको छ ।
जसमा शाहीको नेतृत्वमा आ,न्दोलन परि,चालन समिति गठन गरिएको छ । जसको उपसंयोजक जेरी ताम्राकार छन् । त्यस्तै,युवा तथा विद्यार्थी समितिको संयोजकमा हेमराज थापा र उपसंयोजक राजेन्द्र ताम्राकार तोकिएका छन् । ज्वाला संग्रौलालाई सं,घर्ष समिति अन्तर्गतको सूचना तथा प्रविधि समिति संयोजक बनाइएको छ । उक्त समितिको उपसंयोजक राम रसाइली छन् ।
यसै बिच हल्ला बाहिरिए अनुसार ज्ञानेन्द्र शाही र हेमराज थापा बिच हात हा,लाहाल भएको खबर बाहिरिएको छन । पुन्य गौतम र ज्ञानेन्द्र शाही बिच पनि भनाभन भएको खबर आएको छ यही बिषयमा पुन्य गौतमले मुख खोलेका छन हेरौ भिडियोमा
Prevमाधव नेपाललाई अहिलेसम्मकै ठूलो झड्का, खनाल समुह नेपालबाट अलग्गियो
Nextभारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकालीमा बगेका जयसिंह धामीको शव ड्रोनका सहायतामा खोज्ने तयारी